Nathalie Roberdison, ”tia mitarika sy manampy ny olona hampivoatra ny tenany aho”
Publié avril 16, 2018 par Book News
Fanirian’i Nathalie Roberdison, tovovavy malagasy nianatra sy nandalina ny “développement personnel”, ny ho tonga mpitarika olona sy hanampy ny tsirairay hampivoatra ny tenany.
Nathalie Rakotoniaina, tia mandalina ny maha-olona
Tovovavy tia mitsikitsiky, tia miresaka ary tia mandalina ny maha-olona i Santatra Nathalie Roberdison Rakotoniaina, antsoina hoe Nathalie Roberdison. 22 taona ity tovovavy ity. Nianatra serasera tao amin’ny Sekoly ambony momba ny ita sy ny serasera (Samis-Esic) izy nandritra ny dimy taona. Mpikambana ao amin’ny CEERE nanomboka ny taona 2016 izy, ary mpikambana Cartel ao amin’ny reussirmavie.mg koa nanomboka ny volana oktobra 2017. Fialam-boly tena ankafiziny ny famakiana boky, na boky fianarana io na boky mitantara ireny tranga ivelan’ny tontolon’ny olombelona ireny na ny “surnaturel”. Tsy tiany kosa ny mipetrapetra-potsiny.
Anisan’ny fialam-bolytena ankafizin’i Nathalie ny famakiam-boky.
cc: Nathalie Roberdison
Liana tanteraka ary te handalina ny maha-olona na ny “développement personnel” i Nathalie. Ny fanampiana ny olona tsirairay, fa indrindra ny tanora, hahafantatra ny tenany sy hametraka ny maha izy azy, no katsahiny amin’izany.
“Tiako ilay izy satria mamelombelona ny maha olombelona ilay “developpement personnel”. Eo ihany koa ny fanahy sy ny vatana”, hoy izy nanamafy izany.
[amazon_link asins=’B078X52K33,2246816815,234402753X,2374480348,2021371336,2702163637,B07C53W3FM’ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’84d4349b-40c3-11e8-8a60-1988b1734c89′]
Faniriany ny hitovy amin’ny David Laroche, izay mpanao famelabelaran-kevitra momba ny maha olona sy ny fahatokisan-tena malaza any Frantsa.
“Nianatra momban’ny fandalinana ny maha olona ihany koa izy dia izaho koa te hitovy aminy ary mbola ho lasa lavitra noho izy aza no tena mety amiko. Tiako loatra manko ny mikirakira ny fanahy, vatana sy ny saina. Manamarika ny fisiana aho”, hoy hatrany izy.
Ankehitriny, manana fikasana hanangana orinasan-tserasera iray ity tovovavy ity. Creativeo no anaran’izany orinasa izany. Sady miompana amin’ny serasera no miompana amin’ny fandalinana ny maha-olona io orinasa io.
Créativeo, orinasa atsangan’i Nathalie Roberdison ankehitriny.
Hanatratrarana izany tanjony izany dia nirotsaka anatin’ny fanaovana famelabelaran-kevitra i Nathalie. Ny sabotsy lasa teo dia nisy ny famelabelaran-kevitra sy fifampizarana izay nataony tany Ambohidratrimo, nahakasika ny fananganana orinasa sy ny famoronana.
“Vondrona notiliana tamin’izany ireo tanora teny Ambohidratrimo. Ezahina tsikelikely ny hitety ny toerana rehetra mba hizarana izay hay ho an’ny tanora mila izany”, hoy izy.
Publié dans Entrepreneurs, Jeunesse et Portrait